Virus သတ်ချင်တယ်ဗျာ - MYSTERY ZILLION
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့်စက်မှာ avast anti virus software တင်ထားတယ် .... အဲဒီ software က တစ်ခါမှ virus ရှိကြောင်း alert မပြဘူးဗျာ .... ခု ကျွန်တော့်စက် virus ကိုက်နေပီထင်တယ် .... စက်ကအရမ်းလေးသွားတယ် .... C Drive တို့ D Driver တို့ဖွင့်ရင် own window နဲ့တက်နေတယ် အ၇င်ကအဲလိုမဟုတ်ဘူးဗျ same window နဲ့တက်တာ folder option မှာလည်း စစ်ပီးပီ ... same window ကိုပဲ check လုပ်ထားတယ် .... နောက်ပီး ထူးခြားတာက avast anti virus software ကို uninstall လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ သူ့ကို uninstall လုပ်မရတော့ တစ်ခြား virus software ပြောင်းတင်ချင်တာ တင်မရဘူးဖြစ်နေတယ် .....format မချပဲ အဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းများ လိုချင်ပါတယ်ဗျာ....ကူညီပါကြပါဦး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ko Istein ကြီးရေ .... avast တော့ ဖယ်လိုက်နိုင်ပီဗျာ
ဒါနဲ့ kaspersky 6.0.2.614 ကို တင်ပြီး Update လုပ်လိုက်တာ Black list ဖြစ်သွားတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါဦးဗျာ NOD နဲ့သတ်တာလည်း မရဘူး ....
ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာက Folder ထဲမှာ အဲဒီ Folder နာမည်နဲ့ပဲ folder တစ်ခုထပ်ပေါ်နေတာပါ
ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ဖွင့်လို့တော့မရဘူး ... အဲဒါ folder တိုင်းမှာဖြစ်နေတာ
Lisence version ၀ယ်လိုက်ပေါ့။တစ်နှစ်လုံးစာမှ 15000 ပဲရှိတယ်။ တစ်လကို ၁၀၀၀ကျော်လောက်ပဲ ကျတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်လို့ရနေပြီပဲ။ သူများအပင်ပန်းခံပြီး ထွင်ထားတာကို ခိုးသုံးတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။ ၀ယ်လို့ရရင်၀ယ်သုံးတာပဲကောင်းပါတယ်။
Kaspersky7သုံးပါ bro.
blacklist မဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။ ှStar Lay တင်ထားတာပါ။
Don't care Virus anymore ...
version 8 သုံးကြည့်ပါလား။ 6,7က အောက်နေပြီ။ ဒီမှာ down လိုက်။
Istein လိုပိုက်ပိုက်ချမ်းသာလို့ဝယ်သုံးချင်ရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာ မဝယ်နဲ့ အနှက်ခံရလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံခြားကနေမှာ။ ခံရတဲ့လူက ခံပြီးသွားပြီ။ သူ့ post တောင် MZ မှာရှိတယ်။ ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး
Istine ရေ ...
Blacklist မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သုံးချင်ဒယ် ... ဟီးးးးး
အမေရိက က ကျနော့ကောင်မလေးတွေ online ကနေ auto update လုပ်ပြီး သုံးတာတော့ တလလောက်ရှိပြီ black list မဖြစ်ပါဘူး။ ဖြစ်သွားရင်လဲ keys တွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ စိတ်ချလက်ချ သုံးပါ။ ကျနော်ကတော့ ဝယ်သုံးတယ်:71:။ ဒါပေမဲ့ version 8 က 6,7ထက်တော့ပိုလေးတယ်။ memory 512 MB လောက် အနဲဆုံးမရှိရင်တော့ မသုံးသင့်ဘူး
ကျေးဇူးပဲ ကိုအိုင်းစတိုင်း၊ ကိုအလက်ဇန်းဒါတို့ေ၇
ခု ကျွန်တော် Kaspersky Internet Security7နဲ့အဆင်ပြေသွားပီဗျ format လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး
Key ကိုတော့ ဒီက http://a.kavkiskey.com/new.html ယူလိုက်တယ်
Kaspersky Anti Virus (kav) နဲ့ Kaspersky Internet Security ဘာကွာလဲဆိုတာ သိချင်သေးတယ်ဗျာ ရှင်းပြပါအုံး
ခိုးသုံးတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကြီးကတော့ သိပ်မလှပဘူးထင်တယ်ဗျာ :2:
ခုလို မြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်လို့ရနေပီဆိုတာ လမ်းညွှန်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်:105: